လှစေချင်သည် မြန်မာသမီးပျိုတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လှစေချင်သည် မြန်မာသမီးပျိုတွေ
Posted by soulfly on Aug 13, 2011 in Copy/Paste | 17 comments
ယနေ့ခေတ် မြန်မာမိန်းကလေးကို မြင်နေရတာ တလွဲ ဆံပင်ကောင်းနေသလိုပဲ။ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံတွေက နိုင်ငံခြားပုံစံတွေဖြစ်လာကြတယ်။အဖော်အချွတ်တွေ များလာကြတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ဘုရားပေါ်မှာတောင် မလိုက်မဖက် အဖော်အချွတ်တွေ တွေ့နေရတယ်။တစ်ချိန်က မြန်မာသမီးပျိုကို လုံမပျိုတွေလို့တောင်တင်စားခေါ်ခံခဲ့ကြရတာပါ။အခုတော့ မလုံမပျိုလို့တောင် ပြောင်းခေါ်ရမလိုပဲ။ မြန်မာမလေးတွေ သတိပြုမိစေချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေး မြန်မာရေသောက်ပြီး မြန်မာလိုမနေနိုင်ကြတော့ဘူးလား မြန်မာသမီးပျိုတွေ…။
ေ၇စီးကြောင်းထဲက ပြန်မတက်နိုင်သူတွေပေါ. ဟီးးးးးးးး
ဒါက မနေ့ က ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှာလဲတာဝန်ရှိပါတယ်။ညောင်ရမ်းမင်းဆက်ခုနစ်ဆက်မြောက် ဘဲအင်းစားစံမင်းလက်ထက်မှာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မဆီလျော်ခဲ့ရင် ပြင်းထန်စွာအရေးယူခဲ့သလို ယခု ဝန်ကြီးများကိုလဲ အစချီပြီး ပြင်းထန်စွာစအရေးယူရမည်
ကမ္ဘာကြီးကလဲပျက်စီးဘို့နီးနေပါပြီ.. တားလို့လဲရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းတာနဲ့ယဉ်ကျေးမှု့တွေပျက်စီးနေကြတာပါ…
အော်Mee ရဲ့အဲ့လို အရေးယူဖို့ မပြောနဲ့ လေ သူတို့ သားသမီးတွေ တောင် မြန်မာဝတ်စုံ ၀တ်ဖူးတဲ့ ၇က်တွေကို လက်ချိုးေ၇ကြည့် ခိုင်းလိုက်ပါအုန်းကွယ်……..
မှန်ပါတယ် ဘုရားကျောင်းကန်သွားတဲ့အခါမှာ မြန်မာဆန်ဆန်လုံချည်နဲ့မှ တင့်တယ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေလည်း အမျိုးသားတွေနဲ့အတူရင်ဘောင်တန်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ခေတ်မှာ နေရာတကာလုံချည်ပြင်ဝတ်နေဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ သရုပ်ပျက်မဟုတ်ဘဲ လုံလုံခြုံခြုံဝတ်လို့ရတဲ့ အ၀တ်အစားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သူ့နေရာနဲ့သူ ၀တ်တတ်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်။ ခံယူချက်က အဓိကပါ…
ခေတ်ရဲ့ရေစီကြောင်းကတော့ လိုက်၍ မမှီ ပြေးလေပြီ …
ဒီထက် ဆိုးမလာ ဖို့ပဲဆုတောင်းနေရတော့မယ်…
ဘုရားကျောင်းကန် တွေမှာ တွေ့နေမြင်နေရတာတော့ အဆိုးတစ်ကာ့ အဆိုးဆုံးပါပဲဗျာ….
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အနှစ်သာရတွေ ၊ ဘာသာရေးရဲ့ အဆုံးအမတွေ ပျောက်ကွယ်တော့မှာလား..
live show ဆိုရင်တော့လန်းပေါ့
အပြင်မှာအမြင်မတော်အောင်ဝတ်တာက သူများသားသမီး ၀တ်တာကို တစ်ခြားလူကသွားပြောရင်ဟာသကြီးဖြစ်နေမယ်။
အဲဒီမိန်းကလေးအိမ်က အုပ်ထိန်းသူ အဖေ အမေရယ်
အဲဒါလည်း မီဒီယာတွေနဲ့ အသက်ဆိုင်ဆုံးပဲ
ရောင်းသူရှိရင် တစ်ယောက်မဟုတ်တစ်ယောက်တော့ ၀ယ်မိမှာပဲ
အဲတစ်ယောက်ဝတ်မိရင် နောက်ထပ်လူတွေလည်း လိုက်ဝတ်ရင်း ပွားလာမှာပဲ
ပို့စ်ကို ဒီထက်ရှည်ရှည်လေး ရေးပေးလျှင် ပိုပြီး ဆွေးနွေးလို့ ကောင်းပါလိမ့်မယ် … ။
မနေ့က စီးတီးမက်နဲ့ ….. တော်ဝင်စင်တာ ခဏရောက်သွားတယ် … အားလုံး လန်ပျံထွက်နေတာ … ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လုံလုံခြုံခြုံ ၀တ်မိတဲ့ ကျွန်မတောင် ပြတိုက်ထဲသွား ရပ်နေလျှင် ကောင်းမလားတွေးမိတယ် .. ။ လုံလုံခြုံခြုံဆိုလို့ … မြန်မာအကျီ င်္ နဲ့ ထမိန် ၀တ်သွားတာ မဟုတ်ဘူးနော် … ဒီအတိုင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဘောင်းဘီ ကွာတားလောက်နဲ့ … အကျီ င်္ ပွပွပဲ ၀တ်သွားခဲ့တာ … ။
သူတို့ကို သူတို့ တကယ့်ကို စလက်ဘရစ်တီတွေများလားမှတ်တယ်… စကတ်တိုတွေ .. အကျီ င်္ရင်စည်းတွေနဲ့ချည်းပဲ … ။ တချို့ကတော့ မိဘတွေတောင် ပါလာသေးတယ်… တချို့က အတွဲလေးတွေနဲ့ … ။ ဘယ်လို မိဘတွေက သားသမီး ဒီလို ဖင်ပေါ် ခေါင်းပေါ်သွားတာ မိန့်မိန့် ကြီး ထိုင်ကြည့်နေသလဲ မပြောတတ်တော့ဘူး … ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်မလေး အတော်များများ .. အရှက်မရှိတော့ဘူး ။
ဒါက ဒီလိုရှိတယ် etone ရဲ့
အခုက ဒီလို မပေါ်တစ်ပေါ်လေး ဟိုပေါ်ဒီပေါ်လေးဝတ်မှ
လူရာဝင်တာတဲ့ နောက် ဘယ်နေရာသွားသွား သွားတဲ့နေရာကို မကြည့်နဲ့
ကိုယ်ဝတ်ချင်တာကို ဝတ်မှ လူပိုကြည့်တာတဲ့ ..
အခုနေအချိန်က လုံလုံခြုံခြုံဝတ်တယ်ဆိုတာက (ဘောင်းဘီကွာတားလောက်နဲ့ … အကျီပွပွ)
ကို မဆိုလိုတော့ဘူး …… ဒီလိုဝတ်ပုံမျိုးက အန်တီတွေ ဝတ်နေကြပြီ ဆိုပဲ …
အဲတော့ ခေတ်မှီချင်ရင် တိုတက်ကြပါစီု့…..
ဒါဆို ဘစ်ကနီပြေးဝယ်လိုက်ဦးမယ် နွယ်ပင်ရေ… ။ ဒီအသက်နဲ့ … အန်တီတန်းတော့ မ၀င်ချင်သေးပါဘူး … ကားတိုးစီးတဲ့ အခါ မမြင်သင့်တာတွေ မပေါ်အောင် .. ခါးပတ်ဖို့သပတ်တထည်ပါ ဆောင်ထားရမယ် .. အတော်ပဲ .. ရေးကူးကန်လည်း သွားလို့ရတယ် ။
မြို့ထဲသွားရင်းလာရင်း ရေကြီးတာနဲ့ကြုံရင် ဆင်းကူးလိုက်ရုံပဲ
လှမှ တို့ ကကြည့်မယ်နော်။
ဝတ်ချင်သလို ဝတ်တာကို တွေ့ ရင်သာ
ကိုယ့် အမ၊ညီမ တွေ လိုက်ဝတ်ရင်
စိတ်တို ဒေါသ တော့ အဖြစ်သား
ခက်တော့ ခက်ပါရဲ့ 
BVC—Shopping Mall in Beijing…Unbelievable !!!
This is in China….. Lian Wah Square shopping mall in Beijing.
Can you believe this is happening in China?
You would think China is the last place for you to see this.
China may still be communist but certainly it has opened up more than thewest in this case!
Where can you see this in the Shopping Mall in the west ?
China has certainly changed!
ကဲ… ဒို့ရွာသားတွေ… ဘာပြောချင်ကြသလည်း… သိချင်သား..
သူများထက် ထူးချင် ထွင်ချင် ထင်ပေါ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပါ။ အထူးသဖြင့် လူငယ်လူရွယ်တွေ။ လှပချောမောတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ ပိုပြီးပြချင်တာ မဆန်းဘူးပေါ့။ ဒီခေတ်ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းက အရှိန်ပြင်းတယ်။ ပိတ်ထားလို့ မရဘူး။ ဒီတော့ လူငယ်တွေကို ဒူးနေရာဒူး တော်နေရာတော်… အဲဒီလစ်မစ်ကိုသိအာင် ထိမ်းမတ်ကူညီပေးရမှာပေါ့။
ဘာတဲ့ အပြောမတတ်တော့ ဆဲ